<h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Model NO.:CFG-9</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Type: Gel-Ink</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Color: black, blue, red</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Open Type:Plug Bush</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Point Type: Bullet Type</span></h1><p style="line-height: 1.5em;"><strong><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Erasable: Unerasable</span></strong></p><p><br/></p>
<h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Model NO.:CFG-10</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Type: Gel-Ink</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Color: black, blue, red</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Open Type:Plug Bush</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Point Type: Bullet Type</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Erasable: Unerasable</span></h1><p><br/></p>
Horsehead Gel pen
<h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Model NO.:CFG-11</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Type: Gel-Ink</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Color: black, blue, red</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Open Type:Plug Bush</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Point Type: Bullet Type</span></h1><p style="line-height: 1.5em;"><strong><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Erasable: Unerasable</span></strong></p><p><br/></p>
<h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Model NO.:CFG-12</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Type: Gel-Ink</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Color: black, blue, red</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Open Type:Plug Bush</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Point Type: Bullet Type</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Erasable: Unerasable</span></h1><p><br/></p>
<h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Model NO.:CFG-13</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Type: Gel-Ink</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Color: black, blue, red</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Open Type:Plug Bush</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Point Type: Bullet Type</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Erasable: Unerasable</span></h1><p><br/></p>
<h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Model NO.:CFG-14</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Type: Gel-Ink</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Color: black, blue, red</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Open Type:Plug Bush</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Point Type: Bullet Type</span></h1><p style="line-height: 1.5em;"><strong><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Erasable: Unerasable</span></strong></p><p><br/></p>
<h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Model NO.:CFG-15</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Type: Gel-Ink</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Color: black, blue, red</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Open Type:Plug Bush</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Point Type: Bullet Type</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Erasable: Unerasable</span></h1><p><br/></p>
Rocking Gel pen
<h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Model NO.:CFG-16</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Type: Gel-Ink</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Ink Color: black, blue, red</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Open Type:Plug Bush</span></h1><h1 style="background: white; line-height: 1.5em;"><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Point Type: Bullet Type</span></h1><p style="line-height: 1.5em;"><strong><span style="font-size:18px;font-family:&#39;Arial&#39;,&#39;sans-serif&#39;;color:#222222">Erasable: Unerasable</span></strong></p><p><br/></p>